ट्रम्प–किम वार्तामा चीनको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरु
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियन सर्वोच्च नेता किम जोन उनको बीचमा भेटवार्ताको तयारी भइरहेको छ । यस्तोमा यो बैठकमा चीनको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने विभिन्न विवरणहरुले देखाउँदै आएका छन् । ... बाँकी अंश»
चीनको ‘बीआरआई’ योजनामा भारत असहमत, मोदीले राखे यस्तो सर्त
२०७५ जेठ २८ सोमबार, काठमाडौं । भारतले चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ । चीनमा आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको क्विङ्डाओमा एसईओ सम्मेलनको क्रममा यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
एउटा ट्वीटले ल्यायो ट्रम्पलाई विवादमा
२०७५ जेठ २७ आइतबार, फ्राङ्कफर्ट । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ बारे आइतबार गरेको टवीटर सन्देश वासिङ्टनको यूरोपप्रतिको विश्वास विगार्ने खालको अभिव्यक्ति भएको जर्मनीले बताएको छ । ... बाँकी अंश»
जि सेभेन को विज्ञप्ति अनुमोदन नगर्न ट्रम्पको आदेश
२०७५ जेठ २७ आइतबार, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडामा जारी रहेको ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जि सेभेन को सम्मेलनले निकालेको निष्कर्ष र त्यसपछि जारी हुने संयुक्त विज्ञप्ति अनुमोदन नगर्ने बताएका छन् । उनले भने– हामीले उक्त सम्मेलनको निष्कर्ष स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र त्यस सम्मेलनपछि जारी गर्ने भनिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि हामीले अनुमोदन गर्नेछौनौँ । ... बाँकी अंश»
ट्रम्पसँगको बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक वार्ताको लागि किम सिँगापुर पुगे
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । उत्तर कोरियन नेता किम जोन उन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुन गइरहेको ऐतिहासिक वार्ताको लागि आइतबार सिँगापुर पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प भन्छन् – ‘सिंगापुर सम्मेलन किमको लागि अन्तिम मौका’
२०७५ जेठ २७ आइतबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको लागि जुन १२ ( जेठ २९ गते) मा हुन गइरहेको सम्मेलन अन्तिम मौका हुने बताएका छन् । अहिले दुई मुलुकहरुको बीचमा भेटवार्ताको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प - किम वार्ता पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भने - 'चीनले चाहे वार्ता सफल'
२०७५ जेठ २६ शनिबार, वासिङ्टन । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पेओले कोरियाली प्रायद्धीपको विषयमा चीनको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । केही विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन् — यस विषयमा चीनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ, उसले खेल्ने भूमिकाको बारेमा हामीले प्रसस्त मात्रामा कुरा गर्ने सक्नेछौँ । ... बाँकी अंश»
चीनले नेभीको विवरण ह्याक गरेको अमेरिकाको आरोप
२०७५ जेठ २६ शनिबार, एजेन्सी। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले चीनले अमेरिकी नेभीको महत्वपूर्ण विवरणहरु चोरी गरेको आरोप लगाएका छन्। चीनले नेभीमा रहेको उच्च संवेदनशील विवरणहरु चोरी गरेको आरोप लगाइएको हो। ... बाँकी अंश»
रुसबाट मिसाइल प्रणाली खरिद गर्ने निर्णयमा भारत अडिग
२०७५ जेठ २६ शनिबार, एजेन्सी। भारतले रुसबाट मिसाइल प्रणाली खरिदमा पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएको छ। रुसका लागि भारतीय राजदूत पंकज शरणले एस–४०० वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरिदबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। अमेरिकाले रसियासँग मिसाइल तथा अन्य सैन्य हतियार खरिद गर्ने मुलकहरुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने बताए पनि भारतले रसियासँग मिसाइल प्रणाली खरिदको निर्णय गरेको हो। ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानको निर्वाचन तालिकामा हेरफेर, मतदान हुने दिन परिवर्तन नहुने
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, इस्लामावाद। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्वघोषित निर्वाचन तालिका हेरफेर गरेको छ। आम निर्वाचनको कार्यतालिका परिवर्तन गरेपनि मतदान हुने दिन भने परिवर्तन नगरिएको आयोगका अधिकारीहरुले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका। आफू ‘कानूनभन्दा माथि नभएको’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार बताएका छन्। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा भएको भनिएको हस्तक्षेपबारे आफूलाई क्षमा याचना गर्ने ‘पूर्ण अधिकार’ भने आफूमा निहीत रहेको उनले दोहोराउनु भएको छ। ... बाँकी अंश»
माओवादीले मोदीको हत्या गर्ने षडयन्त्र गरेको भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको खुलासा
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, जम्मु, भारत । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षा प्रति सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प - किम वार्ता पूर्व रुसी राष्ट्रपति पुटिन चीनमा
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र उनका रुसी समकक्षी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच शुक्रबार भेटवार्ता हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनलाई अमेरिकाको ह्वाइट हाउस बोलाउने योजना बनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी फेरि चीन जाँदै, सीसंग हुँदै भेट, के पर्यो त्यस्तो ?
२०७५ जेठ २४ बिहिबार, नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी शनिबारै चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । केही हप्ता अगाडी चीनको भ्रमण गरेका मोदी छोटो समयमै फेरी चीनको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति सि चिन फिङलाई भेट्ने भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
वास्तवमा के चाहन्छ उत्तर कोरिया ?
२०७५ जेठ २४ बिहिबार, काठमाडौं । जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियन सर्वोच्च नेता किम जोन उनको बीचमा ऐतिहासिक वार्ता हुने तयारी भइरहेको छ । यसअघि उत्तर कोरियाले विभिन्न किसिमका मिसाइलहरु परीक्षण गर्दै अमेरिकालाई धम्क्याउने गरेकोमा अहिले भने अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग उसको वार्ता हुन लागेको हो । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प–किम वार्ता स्मरणीय बनाउन सिंगापुरका उच्च अधिकारी उत्तर कोरिया जाँदै
२०७५ जेठ २४ बिहिबार, सिंगापुर । सिंगापुरका विदेश मन्त्रीसहितको उच्च सरकारी कुटनीतिज्ञहरूको टोली उत्तर कोरिया जाने भएको छ । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमबीचको वार्ताको तयारीका लागि सिंगापुरको टोली उत्तर कोरिया जान लागेको हो । ... बाँकी अंश»
कतारसँग के चाहन्छ साउदी ?
२०७५ जेठ २३ बुधबार, दोहा । कतारका विदेशमन्त्री मोहम्मद विन अब्दुल्लाहरहमान अल थानीले आफ्ना विरुद्धमा छिमेकी देशहरुले नाकाबन्दी लगाएर संकट सिर्जना गर्न खोजेपनि कतार कमजोर नभएको बरु झन बलियो भएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
सिँगापुरको यो टापुमा हुँदैछ गोर्खा सुरक्षाबीच ट्रम्प–किम वार्ता
२०७५ जेठ २३ बुधबार, काठमाडौं । अत्यधिक चासोका साथ हेरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोन उनबीचको वार्ता सिँगापुरको सेन्तोसा टापुको एक होटलमा हुने भएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार यस्तो जानकारी दिएको हो । ... बाँकी अंश»
ज्वालामुखी विष्फोटमा दुई सय जना बेपत्ता, मर्नेको संख्या ७५ पुग्यो
२०७५ जेठ २३ बुधबार, काठमाडौं । आइतबार ग्वाटेमालामा भएको ज्वालामुखी विष्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ७५ पुगेको छ । साथै यो विष्फोटमा परी एक सय ९२ जना मानिसहरु हराइरहेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»